श्यामल- जीवन बचाइमा कवि ईश्वरवल्लभको आफ्नो भिन्नै अराजक शैली थियो। कुनै प्रकारका सामाजिक नियम र मान्यताका खिलाफ जान उनको विद्रोही चेतले उनलाई हमेसा उक्साइरहन्थ्यो। हेराइमा उनी असाधारण थिएनन्। हिउँदमा मोटो र लामो गलबन्दी अनि मोटै सुइटर, कमीज र पाइन्टमा कतै आफ्नो लक्ष्यमा हिँडिरहने मध्यमवर्गीय सहरिया अधबैंसे थिए वल्लभ मैले भेट्ता। तर उनी सबैलाई तपाईं नै भनेर सम्बोधन गर्थे। दाँतहरू कमजोर हुन थालेका थिए, र जिब्रो खाली ठाउँबाट बाहिर निस्कन हतारिएको जस्तो लाग्थ्यो। कुनै विसंगत दृश्य वा व्यवहारको चाल पायो भने हाँसेर उडाइदिने बानी थियो वल्लभ दाइको।
हामी फसिकेवकोे एउटा चल्तीको भट्टीमा छिर्‍यौं र कुनाको एउटा टेबुलमा केन्द्रित भयौं। टेबलमा खाने कुरा आयो। उनले आलुबाट सुरु गरे र मैले टाउकोको भुटुवाबाट। सामान्य रूपमा गफ चलिरहेको थियो। हाम्रो वासः को नसा र गफगाफको नसा दुवैमा अजीबको सन्तुलन थियो। समय कति हुत्तिएर जान्छ भन्नेमा हामी उति सचेत थिएनौं।
नीरमानको चर्को आवाजले मधुशालाको वातावरणलाई फरक खालले प्रभावित गर्‍यो। मधुशालाको सिलिङमुनि भुइँदेखि माथि आधाजति त बाक्लो धुवाँले भरिएको थियो, त्यहाँ आधा उभिनु पनि सम्भव थिएन। वरिपरिका मधुरसप्रेमी जनहरू एकोहोरिएर नीरमानले गरेको हल्लातर्फ क्रोधजन्य आँखाले हेरिरहेका थिए। माकः साहु विस्फारित आँखाले हामीतिरै हेरिरहेको थियो। यो कुरा न वल्लभलाई न मलाई नै पचिरहेको थियो।
माकको भट्टीबाट निस्केपछि हामीलाई नीरमानले बाहिरसम्म पुर्‍याउन ल्याए र हात मिलाएर विदाइ गरे। हामी वटु र भोसिको हुँदै, गफैगफमा मानिसहरूसँग ठोक्किनबाट जोगिँदैं वीर अस्पताल र लक्ष्मी ब्लड बैंक बीचको गल्लीबाट महांकाल मन्दिरतिर लाग्यौं। शवगृहको ठीक अगाडि दुईतले लामो र विशाल पुरानो इँटाको घर थियो जहाँ अहिले त्रासजन्य पीडा (ट्रोमा) उपचार केन्द्र बनाइएको छ। त्यहीँनिरको पहिलो ढोकाको छेउमा पुगेपछि वल्लभ दाइलाई पिसाबले च्यापेछ। बत्ती नभएको काठमाडौंको निवीड अन्धकारमा कसैले टर्च बाल्यो भने शवगृह बाहिरपट्टिको भित्तामा मानिसहरु पिसाब गरिरहेको देख्नु सामान्य थियो त्यति बेला।
मतिर हेर्न छाडेर वल्लभ तिनै महिलासँग बाझ्दै आफ्नो काम समाप्त गर्दै थिए। यस्तो बेला मानिसको पिसाब रोकिनुपर्ने हो, तर वल्लभको मामलामा त्यो ग्रन्थिले काम नगर्ने रहेछ। उनी भन्दै थिए, 'मेरो देशमा मैले पिसाब गर्न पनि नपाउने?' पञ्चायतकालमा यस प्रकारको असामाजिक मानसिकतालाई पनि विद्रोहको जामा पहिर्‍याएर त्यसको बचाउ गर्नु राम्रो हुन्थ्यो।
'तपाईं पनि त्यो आइमाईजस्तो र छ! मेरो देशले के मलाई पिसाब गर्ने अधिकार समेत दिएको छैन। थुक्क...!' यसो भन्दै गर्दा हामी बाटो काटेर महाकालस्थानको मन्दिरनिर पुगिसकेका थियौं। म उनको क्रोधलाई मत्थर पारेर अघि बढाउन चाहन्थें। उनलाई थापाथलीसम्म पुर्‍याएर म नक्सालतिर लाग्ने विचारले उनको हात समातेर शहीद गेटतिर डोर्‍याइरहेको थिएँ। उनी कहिलेकाहीँ बी-बीचमा त्यो महिलालाई सम्झँदै भन्थे, 'त्यो आइमाई नै होइन भाइ, त्यसले पिसाब गरिरहेको पुरुषतिर किन हेरी?'